एनसेलमाथि निशानाः विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथिको आक्रमण ! - Jhilko
एनसेलमाथि निशानाः विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथिको आक्रमण !
काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंसहित देशैभरि एक दर्जन जति एनसेलको टावरमा आक्रमण भएको छ ।
यो आक्रमण कसले र कुन उद्देश्यका साथ ग¥यो यो समाचार तयार पार्दासम्म एकिन भइसकेको छैन । किनभने यो घटनाको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।
देशमा शान्ति र स्थिरता नचाहने देशी तथा विदेशी शक्तिले नै आक्रमण गराएकोमा दुई मत नभएको धेरैको मत छ । संघर्षको जुन विधि र तरिका अपनाइयो, यसले कुनै लहडमा मात्र यो बम आक्रमण भएको भनेर कसैले मान्न तयार छैन ।
ललितपुरको एनसेलको टावरमा निशाना बनाएर गरिएको बम बिस्फोटबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । देशका अन्य भागमा भएको एनसेलमाथिको आक्रमणमा भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति भएको थाहा भएको छैन ।
एनसेलमाथि निशाना बनाएर गरिएको आक्रमणको कारण दुइटा हुनसक्छ । पहिलो, राजनीतिक कारण । दोस्रो, आर्थिक उठाउन दवाव ।
विदेशी लगानीको वहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विस्थापित, निरुत्साहित गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा जागरण ल्याउने । गलत विधि अपनाइए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गराउन सकारात्मक उद्देश्य राखेको मान्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीलाई सिध्याउने गरी विदेशी एकाधिकार पुँजीवाद हावी भएको, प्रात्साहन पाइरहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा दवावमुलक संघर्ष गरेको हुनसक्छ । यदि त्यसो हो भने अहिले अपनाएको संघर्षको तरिकालाई विरोध गर्दागर्दै पनि उनीहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा जोड्न सरकारले विशेष पहल बढाउनु पर्छ ।
यो सम्भावना एकदमै न्यून छ । बरु सापेक्ष रुपमा सही राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा यो सरकारले अडान लिएका कारण यसलाई अप्ठ्यारो पार्न, दवाव दिन यस्तो खालको आक्रमण गरेको हुनसक्छ ।
आर्थिक उपार्जनका लागि आक्रमण । एनसेलले राज्यलाई कर नदिएकोको विरोधका नाममा आक्रमण । एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको चौतर्फी विरोध भएकै छ । यसमा सहानुभूति पाइने तर यसमा आफ्नो अस्तित्व देखाएर कुनै अमुक शक्तिले आर्थिक संकलन गर्ने गतिलो माध्यम बनाएको हुनसक्छ बम आक्रमण गरेर । त्यसो हो भने यो एकदमै वेठीक हो । यस्तो उद्देश्य राखेर आक्रमण गरिएको हो भने त्यो शक्ति कमजोर मात्र हुने छैन, अस्तित्व नै धरासायी हुन्छ ।
अस्थिरता नै मूृल उद्देश्य
नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउन पश्चिमा र भारतीय शक्ति निरन्तर लागिरहेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न दरवारिया तत्व पनि लागेकै छन् । नेपालमा ठूलठूला बिस्फोट गराउनका लागि कैलालीबाट ठूलो मात्रामा हतियार भित्र्याएको कुरा विभिन्न स्रोतले बताएको छ । यस्ता गतिविधि निरन्तरतामा जानसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
यो सरकार घाँडो
रिमोटबाट देशमा शासन गर्न चाहनेहरुका लागि मुलतः के पी ओलीको नेतृत्वको यो सरकार घाँडो सावित भएको छ । जनअपेक्षा अनुसार केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले धेरै दैन्दिनका काम गर्न नसके पनि देश र जनताको पक्षमा रणनीतिक महत्व राख्ने कामहरु गरेकै छ । सीमा कमजोरीका बाबजुद राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा के पी ओली सरकारले स्वतन्त्र अडान लिएकै छ । पार्टीभित्रैबाट घेर्ने, आक्रमण गर्ने काम भइरहेको बेलामा वाह्य पक्षबाट समेत यो सरकारलाई तीब्र आक्रमण गरिएको छ ।
देशमा शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता र समृद्धिको पक्षमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई कमजोर पार्दा, अप्ठ्यारो पार्दा नै आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भनेर चौतर्फी र सबै संघर्षको तरिका एकीकृत ढंगले चलाइएको छ ।
घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
साताको शेयर बजार ः अर्ब पनि पुगेन कारोवार
कर्पोरेटको प्रवेश : राजनीतिमा धमिरा
भारतीय राजनीतिको मुख्य धमिरा कर्पोरेटको प्रवेशले गर्दा भएको हो । बृटिशकालीन उपनिवेशको...
सुनको भाउ बढ्ने क्रम रोकिएन, कारण यस्तो
इरानले इराकस्थित दुई अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा दर्जन बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि...
सञ्चार क्षेत्र छाडा भए आम पाठकमा राम्रो पर्दैनः मन्त्री...
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रले राज्यलाई रचनात्मक खबरदारी...
कोरोनाको हटस्पटको रुपमा देखिएका क्षेत्र उदयपुरमा कम्तीमा ५००, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज...